Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Guam na -enweghị ndị njem Korea bụ akụkọ ugbu a
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • News • Tourism • Transportation
Taa, Guam nabatara ndị ọbịa n'ụgbọ elu Korea Air n'ụtụtụ, na -aka akara nnabata a maliteghachiri njem.
The Amlọ Ọrụ Gọọmentị Guam (GVB) na AB Won Pat International Airport Authority (GIAA) nabatara ụgbọ elu mbụ si Korea Air n'isi ụtụtụ a.
Ụgbọ elu B777-300 si Incheon rute na mmadụ 82 nọ n'ụgbọ ahụ.
Airgbọ elu Korea amalitela ọrụ izu ụka ọzọ na Guam kemgbe mmalite nke oria ojoo COVID-19.
“Obi dị anyị ụtọ ịnabataghachi Korea Air ma kelee ha maka itinye Guam ọzọ. Ọ bụ ezie na afọ na ọkara gara aga bụ ihe ịma aka nye onye ọ bụla, ọ dị mma ịhụ ka ọkụ na njedebe nke ọwara ahụ na -enwu, ”ka Dr. Gerry Perez, onye isi oche GVB kwuru. "Anyị na -atụ anya ka anyị na ndị ọrụ ụgbọ elu anyị na ndị mmekọ azụmahịa njem na -arụkọ ọrụ iji mee ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Guam dị ike."
T'way maliteghachiri ọrụ ikuku oge niile na July 31st wee bute ndị njem 52 na Guam. Jin Air gbakwunyere ọrụ ikuku ya ugboro abụọ kwa izu, nke na-amalite taa n'elekere 2:42 nke abalị Jin Air bụ naanị ụgbọelu sitere na Korea nke nwere ọrụ ikuku oge niile n'oge ọrịa.
GVB na -aga n'ihu na -eduzi ekele mbata iji nabata ụgbọ elu niile na -amalite. A na -atụ anya ụgbọ elu ejikọtara ọnụ ga -enye Guam ihe dị ka oche 3,754 ruo ngwụcha Ọgọstụ.
Naanị ụbọchị 4 gara aga Tway bidoro ọrụ n'etiti Korea na Guam.